प्रधानमन्त्रि देउवाको यस्तो घोषणाले देशभर तरङ्ग, के भने त्यस्तो ? — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्रि देउवाको यस्तो घोषणाले देशभर तरङ्ग, के भने त्यस्तो ?
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एउटा सर्त राखेका छन्। प्रचण्डले कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवासँग गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानपर्ने सर्त राखेका हुन्।
यो सर्तमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत भएका छन्। वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो भने गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनाव लड्नुपर्ने उनीहरुको सर्त छ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रचण्ड र नेपालले देउवासमक्ष यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो।
प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी चुनावका लागि तयार छौं, तर गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनाव लड्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि चुनाव जहिले भएपनि गर्न सकिन्छ।
कांग्रेसकै नेताहरूले देउवालाई गठबन्धन नगर्न सुझाव दिइरहेका बेला प्रचण्डले अर्थपूर्ण हिसाबले बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रचण्डले यो प्रस्ताव राखेपछि नेपालले ‘हो’ भन्दै सहमति जनाएका थिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने केही बोलेनन्।
प्रचण्ड र नेपालका तर्फबाट यस्तो शर्त आएपछि देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए। बैठक लगत्तै देउवा आफूनिकट नेताहरूसँग परामर्शमा छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित नेकपा एसनिकट निजामति कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरु चुनावबाट भाग्न खोजेको नभइ जुनसुकै समयमा चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार भएको बताएका हुन्।
तर उनले चुनावसम्म अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन कायम हुनपर्नेमा जोड दिए। एमालेले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष नेपालले भने– हामी चुनावबाट डराएका छैनौं, तर गठबन्धन तोड्न खोज्नेहरुले अनेक भ्रम छरिरहेका छन्।
उनले अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गरे । शनिबार गठबन्धनको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेताहरुले गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै कायम रहने आश्वासन दिएको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत त्यसमा सकारात्मक रहेको बताए।